5 Sababaha Si Raaco Tareenadu Night In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Sababaha Si Raaco Tareenadu Night In Europe
5 Sababaha Si Raaco Tareenadu Night In Europe
Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo
Inkasta oo tareen qarsoodiga ah habeen Yurub waxa ay noqonayaan wax ka mid ah noocyada khatar ku (diyaaradaha miisaaniyadda aan dooneyno aad ugu!), tareen ku caashaqay ayaa weli ma quusan! Waayo, kuwii ku caashaqi jiray xamaasad tareenka, waxba garaaca bootimaalaysiga saarnaa tareenka habeen iyo riyaaqayaa quruxda masaafo dheer oo aan haysan si bankiga u jabin si aad u hesho si ay u socdeenna final.
Haddii aad la qorsheynayo safar tareen habeen dibadda laakiin aadan hubin in tareenada habeenkii waa ikhtiyaarka ugu fiican, ha ka akhriso hoos ku.
FIIRO GAAR AH: All of sababaha inaan isugu gudbo "for bilaabo, ma waxaad ku Bixisaan doonaa 10+ saacadood malabsanaya on garabkaaga sida madaxaaga jiggles soo hor tareenka ".
Tareenadu Night Ma kharash-ool ah
Waayo, Socotada kasta on miisaaniyadda (ama kuwa ka badan halkii ay ku qaataan lahaa on saxan wanaagsan, iyo meelaha badan oo ay doonayeen ayay ku tigidh), tareenada habeenkii waa ikhtiyaarka ugu miisaaniyad-friendly in ay doorato (gaar ahaan safarka dheer). Waxaad filan kartaa in kharashka gooyay qeybtii marka aad bedelo saddex ama afar habeen hotel a (xitaa mid ka mid ah qaybta ka jaban) tiro isku mid ah habeen on tareen, badbaadinta kor ku saabsan $500! Haddii ay taasi ma miisaaniyad smart, garan mayno waxa!
Karti Time ee Tareenadu Night & raaxada
Saamayntii safarka tareenka waa la dafiri karin! tareenada Yurub ayaa si degdeg ah, abaabulan iyo wax kasta oo aad raadinayso in doorasho gaadiid ah oo aan loo eegayn haddii aad tahay safrin meel u dhow sida Italy ama meel dheeraad ah. Ku safrid tareen waa fantastic waayo, qof kasta oo doonayo inuu noqdo kan ugu horreeya ee line xafiiska safarka, ay museum jecel ama meel kasta oo kale waxay lahaa qorsheeyay si ay u tagaan. tareenada Night idin siin fursad u yaalaha qaar ka mid ah inteeda kale inta lagu jiro wakhtiga habeenkii. Markaas isticmaalaan maalintii oo ku raaxaysan sceneries qurux badan iyada oo uu furmo suuqa iyo inta lagu jiro joogsato tareenka.
Lecce in ay Tareenadu Milan
Reggio Calabria in Tareenadu Milan
Bari si ay Tareenadu Milan
Salerno in Tareenadu Milan
Deeggaanka u fiican
Sida caadiga ah tareenada, tareenada habeenkii waa ikhtiyaarka ugu fiican safarka for dhulkeenna. Tan iyo markii ay soo saaraan CO2 ilaa hadda ka yar per rakaabka ka badan diyaarado samayn, waxay noqon karaan gaadiidka mustaqbalka. Sidaas, haddii aad tahay deegaanka miyir, aad u ogaato wixii jidka aad doonaa in la safraya hadda ka dib.
Levanto in Tareenadu Turin
La Spezia in Tareenadu Turin
Naples si Tareenadu Turin
Rome si ay Tareenadu Turin
Tareenadu Night waa weyn u Samaynta Friends
Haddii aad tahay kaligood safra, tareenada ayaa la idin siinayo fursad ay kula kulmaan dad badan oo ka Europe, oo dhan ka duwan midba midka kale. Raadi yar danaha la mid ah in ay ka hadlaan, oo aad aadka u sameeyey saaxiibo u ah nolosha! Plus, waxa ka sii muhiimsan waqtigan agagaarka (ugu yaraan mawduuca aynu ku tahay), aad aamin ah laga helay, dad lagu kalsoonaan karo in ay la wadaagto qol jiifka! tareenada Night waa yaab, laakiin ka biyodiiday waa in aad soo afjari karo in waab la farabadan ee dadka kuurin, qurun (ka xumahay!) ama ... kaliya qufacdo badan. Sidaas, helo koox u weyn ayay u tahay chat ah oo ah habeen yar oo qol isku hawadu waa fantastic!
Lyon in Tareenadu Nice
Paris si ay Tareenadu Nice
Avignon in Tareenadu Nice
Marseilles in Tareenadu Nice
Codsiga muuqaal dabiici ah
Cajiib, waxaan ku dhownahay inaan ilaawno inaan ku darno faa'iidooyinka weligood-dhiirrigelinta ah ee tareennada habeenkii la yiraahdo – muuqaal dabiici ah racfaanka! Ha seexan dhex gacamo, Alps, iyo sceneries kale la mid ah oo qurux badan. Laakiin ma dareemaan waajib in la soo jeedo sidii aad noqotay xudunta warshadaha Germany, labada. Oh, iyo - sawirro ka qaad, xitaa haddii ay kaliya daaqadda kaga dhex!
Noo sheeg by na Tweets at @SaveATrain! , Waxaad ka heli kartaa channels our bulshada kale ee hoose ee Save-A-tareenka iyo dabcan, waxaad ka dalban kartaa naga tigidhada tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-reasons-night-trains%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / es si / de ama / iyo luuqado badan.
#night #trainlovers tareenada tareen safarka travelgermany travelitaly traveltips
Maxaa si aad u aragto In Provence France
Safarka tareenka, Tareenka Safarka Faransiiska, safarka Europe
7 Siyaabaha si aad caafimaad u Iyadoo Socdaalka